राेचक Archives - Page6of 8 - Saptakoshionline
तस्बिर भित्रको तस्बिर : बिना शब्दको एउटा बुलन्द कथा (फोटो फिचर)
(एजेन्सी) – सोनी बिश्व फोटोग्राफी अवार्ड्स २०१८ फोटोग्राफी दुनियाँमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने एउटा उत्कृष्ट माध्यम हो । यसमा हरेक समुह वा उमेरका फोटोग्राफरले भाग लिन सक्छन् । यस प्रतियोगिताको बिजेताले उचित पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नेछन् । आउनुस् हेरौँ यस प्रतियोगिताका बिजेताका उत्कृष्ट तस्बिरहरु –
झट्ट हेर्दा पत्याउनै नसकिने यी आश्चर्यजनक तस्बिरहरु ! (फोटोफिचर)
एजेन्सी– झट्ट हेर्दा अनौठा र अपत्यारिला यी स्विडिस कलाकार एरिक जोनसनले सम्पादन गरेर तयार परेका हुन् । निकै आकर्षक लाग्ने यी तस्बिर सामान्य मानिसको सोच्नेभन्दा निकै फरक तरिकाले सम्पादन गरिएको छ । जोनसनले कागजका टुक्राको प्रयोगबाट खिचिएको तस्बिरलाई फोटोशपको माध्यमबाट तस्बिरलाई जीवन्त बनाएका हुन् ।
पढाइ, प्रेम, पोलिटिक्स, पावर, पहिचान, प्रसिद्धि र पैसा कमाउने कलेज
इटहरी/ स्कुल जीवन हर कोहीलाई झुर लाग्ने गर्दछ किनकि त्यहा पुरै ८ घण्टा शिक्षकको अधिनमा बस्नु पर्दछ तर जब उनीहरु उच्च माध्यमिक तह सम्मको अध्ययन पुरा गर्दछन तब उनीहरु कलेज लेबलमा पुग्दछन र त्यहा उनीहरुको लाइफ्mले अर्कै मोड लिदछ किनकी स्कुल जस्तो हुदैन । विपरित लिंगीप्रति आकर्षण पनि यही उमेरमा बढ्न थाल्छ । विभिन्न हर्मोनहरुको उत्पादनले शरीरमा काउकुती लगाउन थाल्छन् । स्कुलमा शिक्षकसँग डराई(डराई पढ्नुप...
एजेन्सी। विमानस्थलमा पासपोर्ट र आईडी फोटोलाई दिएर प्रत्येक मुलुकले आफ्नो कानुन बनाएका छन् । जस अन्तर्गत फोटो क्लियर, कपाल पछाडि लगेको र नहाँसेको फोटो चाहिन्छ । तर यस्तो किन गरिन्छ तपाइँलाई थाहा छरु केही वर्ष अघि सम्म फोटोमा चश्मा लगाउने र कपालले अनुहारलाई थोरै ढाक्ने अनुमति थियो। तर अमेरिकाको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा २६÷११ आक्रमणपछि यी सबै कुरा परिवर्तन भए । तर मुख्य कुरा पासपोर्टको फोटोमा मुस्कु...
पौराणिक युगका पत्रकार नारदको कथा
देवताहरूका ऋषि अर्थात् देवषिर् नारद । जेष्ठ कृष्ण द्वितीयालाई नारद जयन्ती मानिन्छ । पौराणिक मान्यताअनुसार यस दिन नारद जन्मिएका थिए । मान्यताअनुसार नारदको जन्म कुनै महिलाविना ब्रह्माबाट भएको थियो तसर्थ यिनलाई ब्रह्माको मानस पुत्र भनिन्छ । नारद मुनिलाई देवताहरूले मात्र नभै असुर, दैत्य, दानव, नाग, यक्ष, गन्धर्व, मानव आदि सबैले उत्तिकै रूपमा मान्दथे । नारद ब्रह्माण्डको जानकारी यताबाट उता अनि उत...
आजकालको जमानामा पैसाको ताकत हरेक सम्बन्धभन्दा ठूलो छ । पैसाले सबै कुरा किन्न सकिन्नँ भन्ने उक्ति आजकाल भन्नका लागि मात्र भनिन्छ । तर वास्तविकता यहि छ कि जोसँग पैसा छ त्यसैको खुट्टामा संसार छ । हामीमध्ये धेरैले आफूसँग एउटा घर होस् र धेरै पैसा होस् भन्ने सोच्छौं जसबाट हामीले आफ्नो र आफ्नो बच्चाको भविष्य सुरक्षित राख्न सकून् भन्ने साचेको हुन्छौं । यो संसारमा केहि यस्ता मानिसहरु पनि छ जसको पैसाले उनका...
बुधबार, बैशाख ०५, २०७५
गज्जबको रेष्टुरेन्टः तपाईं पेटभर खानुस्, पैसा तिर्नपर्दैन
भारतको गुजराँतस्थित अहमदावादमा यस्तो रेष्टुरेन्ट छ जहाँ तपाइँ आफूले चाहेको खाना अर्डर गर्न र खान सक्नुहुन्छ, तर त्यसको पैसा तिर्नुपर्दैन । रकम अरु कसैले चुक्ता गरिसकेको छ । अतिथि देवो भवः को भावनामा चलिरहेको छ, त्यो रेष्टुरेन्ट । गुजराती सेवा क्याफे नामक उक्त रेष्टुरेन्टमा दिउँसो र बेलुकाको खाना तपाइँ सित्तैमा खान सक्नुहुन्छ, उपहारको रुपमा । कुनै अन्जान मानिसले तपाइँलाई भोजन उपहार प्रदान गरेको ...
यी हुन पुरुषसँग नभई रुखसँग विवाह गर्ने महिला
काठमाडौं । मेक्सीकोका एकल महिलाले पुरुषसँग नभई रुखसँग विवाह गरेका छन् । उनीहरुले पतिका रुपमा रहेका रुख उनीहरुसँग बोल्न नसके पनि आफ्नो पति भएको स्वीकारेका छन् । रुख आफ्ना पत्नीभन्दा निकै अग्ला छन् । रुखको त थाहा भएन तर रुखका पत्नीहरु भने आफूले पति वरण गरेका रुखसँगै जीवन बिताउन तयार भएको बताएर सबैलाई चकित पारेका छन् । हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, संसारका प्राणीलाई चाहिने अक्सिजनको पूर्ति रुखब...
अब खानेकुरासँगै कप, प्लेट र चम्चा पनि खान पाइने
प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगका कारण वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको नकारात्मक असरबाट जोगाउनका लागि वैज्ञानिकहरुले दिनहुँ नयाँनयाँ प्रयोग र आविष्कार गरिरहेका छन् । सोही क्रममा वैज्ञानिकहरुले प्लास्टिकको प्रयोग हुने केही सामाग्रीहरु यस्तो पदार्थबाट बनाएका छन् जसलाई खान मिल्दछ । भारतको हैदरावादका नारायण पिसपति नामक वैज्ञानिकले अन्नको पिठोबाट चम्चा तयार गरेका छन् । उक्त चम्चा हामीले दिनहुँ खान...
थाहापाउनुस् किन हुन्छ ‘हर्ट अट्याक’, कसरी बच्ने ?
आजभोलि हर्ट अट्याक कम उमेरका मानिसलाई पनि हुने गरेको छ । तर हर्ट अट्याक किन हुन्छ रु र यसको असर के हो भन्ने बारेमा आज पनि मानिस जानकार छैनन् । आउनुस् हाज हामी हर्ट अट्याक हुनको कारण र यसले शरीरमा पर्ने असर बारे चर्चा गर्दै छौं । कमजोर मुटु मानिसको मुटु मजबूत कोशिकाहरुले बनेको हुन्छ । जसका कारण हाम्रो मुटु स्वस्थ रहन्छ तर आजभोलिको अस्वस्थ्य खानपिनका कारण कम उमेरमै यसमा समस्या आउन...